कोरोनाको औषधीको गुर्जाे, के छन् यसको उपयोगीता ? देशभर किन प्रभावकारी बन्दै छ 'गुर्जाे अभियान' ? - सिम्रिक खबर
कोरोनाको औषधीको गुर्जाे, के छन् यसको उपयोगीता ? देशभर किन प्रभावकारी बन्दै छ ‘गुर्जाे अभियान’ ?
गुर्जाे, फाइल फोटो
काठमाण्डौ । काभ्रेको बनेपा नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिं वादेले कार्यालयमा आई निःशुल्क ४० गुर्जो (चिनी लहरो) प्रदान गर्ने स्थानीय युवालाई ‘स्याबासी’ र बधाई दिए । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर अरुको स्वास्थ्यप्रति चासो दिएकोमा वादेले स्याबासीसँगै बधाई र धन्यवाद दिएका हुन् । “उहाँहरुको अभियानलाई स्याबासी, धन्यवाद र बधाई दिनैपर्छ, अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुको योगदान अमूल्य छ”, वादेले भने । धुलिखेल नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले बनेपाका युवाको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिममा मानव सेवामा खेटेकामा ‘धेरै–धेरै बधाई’ भन्दै अभियानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। “उहाँहरुको साहसलाई ‘स्यालुट’ गर्नैपर्छ, आफ्नोभन्दा अन्यको सेवामा खट्ने मेहनती युवा टोलीलाई”, उनले भने । उनका अनुसार युवाले थप आवश्यकता परे पुनः ल्याइदिने आश्वासनले आफू निकै खुशी भएको बताए ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढिरहेका बेला बनेपा–१० जनागालका युवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ‘फ्रन्ट लाइन’मा खट्ने काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर र काठमाडौँका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिलगायतलाई ठूलो परिमाणमा निःशुल्क गुर्जो वितरण अभियान चलाएको पनि हप्ता नाघिसक्यो । सामाजिक अभियानकर्मी मुक्ति विष्टले केही युवाको साथ लिएर यो अभियान सञ्चालन गरेका हुन् । उनीहरुको हालको दिनचर्या गुर्जो सङ्कलन र वितरणको योजना बनाउँदै व्यस्त रहन्छ । “गुर्जो पाउने निकायबाट पाइएको स्याबासी, बधाई र धन्यवादले हामीलाई निकै उत्साही बनाएको छ, हाम्रो अभियान जारी नै छ, थप आवश्यकता पर्नेलाई पुनः दिने योजना पनि छ”, विष्टले भने । उनको अभियानमा गुर्जो सङ्कलन तथा वितरणमा स्थानीय रवीन्द्र देउजालगायत युवाले साथ दिएका छन् । “काभ्रेपलाञ्चोकका गुर्जो दिने स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायमा लेजाने योजनामा छौँ”, देउजाले भने ।